PT APTT TT FIB - Xinjirowga Degdegga ah ee Xakameynta Xirmooyinka Tijaabada Daryeelka-Sinocare
Taxanaha Korjoogteynta Gulukoosta Dhiigga
Taxanaha Hawlo Korjoogteyn Kala Duwan
Barta Tijaabada Daryeelka
Waxyaabaha Baadhitaanka Aan Xuduuda Lahayn
Alaabta Ka Hortagga Sonkorowga
Waxyaabaha Tijaabada ah ee SARS-CoV-2
WARAR & TRADESHOWS
PT APTT TT FIB - Qalabka Xakamaynta Xawaaraha ee Xinjirowga
Hawl fudud, si buuxda otomaatig ah
Looma baahna qalliin / miisaamid xirfadeed
[emailka waa la ilaaliyay] Qalabka loo yaqaan 'APTT / PT / TT / FIB Reagent Kit' waxaa loogu talagalay in lagu cabbiro waqtiga firfircoon ee tromboplastin firfircoon (APTT), waqtiga prothrombin (PT), waqtiga thrombin (TT) oo si tiro ahaan ah loo ogaado fibrinogen (FIB).
Xaalad ahaan, waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu baaro cilladaha soo jireenka ah iyo kuwa ka baxsan ee nidaamka xinjirowga, waxay ka tarjumaysaa nuxurka ama qaabdhismeedka aan caadiga ahayn ee plasma fibrinogen iyo cillad la'aanta nidaamka fibrinolytic. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa baaritaanka kaaliyaha ee xinjirowga intravascular iyo fibrinolysis-ka aasaasiga ah, la soco daaweynta xinjirowga lidka ku ah, heparin daawada xinjirowga lidka ku ah iyo daweynta thrombolytic.
Waqtiga xinjirowga qayb ahaan firfircoon (APTT) waa baaritaan tijaabo ah oo lagu ogaanayo arrimaha xinjirowga xasaasiga ah. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu ogaado cilladaha ku yimaadda arrimaha la iska dhaxlay ama la helay (VIII, IX ama XI) ama la ogaado jiritaanka ka hortageyaasheeda. APTT sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu caddeeyo maqnaanshaha xinjirowga XII, prokallikrein iyo culeyska molikal sare ee kallikrein. APTT waa cabirka la doorbido ee la socoshada heparin aan soo go'nayn.
Caafimaad ahaan, waqtiga prothrombin (PT) waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu baaro cilladaha qalafsan ee nidaamka xinjirowga iyo in lala socdo daaweynta xinjirowga lidka ku ah ee afka laga qaato. Marka la sii daayo PT, waxaa laga yaabaa in laga dhaxlo qodobka II, V, VII, X yaraanta iyo hypofibrinemia (ama afibrinogenemia); Ka maqnaanshaha cuncunka cuncunka ee la helay waxaa laga helaa DIC, ficil-celinta ugu weyn ee fibrinolytic, cagaarshowga xannibaadda iyo yaraanta fitamiin K; iyadoo la gaabiyey PT, waxaa jiri kara cunsur xad-dhaaf ah V, ka-hortagga uurka ee afka, hypercoagulability iyo cudurada dhiigga ku dhaca.
Waqtiga Thrombin (TT) waa baaritaan baaritaan si loo helo awooda plasma fibrinogen si loogu badalo fibrinogen. Cudurka dheeriga ah ee loo yaqaan 'TT', waxaa laga yaabaa inuu kordho heparin, jiritaanka dawada xinjirowga lidka ku ah ee badan, sida cagaarshowga, cudurrada kalyaha, iwm; hypofibrinemia (ama afibrinogenemia), frinogenemia aan caadi ahayn, FDP oo kordhay, sida DIC, fibrinolysis-ka aasaasiga ah, iwm. TT ga oo gaagaaban, waxaa jiri kara xinjiro dhiig oo yar ama Ca + dhiiga laga qaadayo.
Fibrinogen sare (FIB) waxaa badanaa laga helaa dhiig aad u xeran, oo lagu arko bukaanada sonkorowga qaba cudurada vascular, ama bukaanada qaba cudurka myocardial infarction, cudurka cerebrovascular, iyo uurka oo ay keento hypertension, iwm. coagulopathy ama fibrinolysis), cudurka asaasiga ah ee fibrinolytic, cagaarshowga halista ah, cirrhosis cagaarshowga, hypofibrinemia laga dhaxlo (ama afibrinogenemia), iwm.
Nidaamka falcelinta wajiga dareeraha, iyadoo la adeegsanayo habka xinjirowga dhiigga ayaa horseeda natiijo sax ah
Natiijada waxaa lagu heli karaa 15 daqiiqo
Kaydadka horay loo buuxiyey & hal-isticmaalka
Hawl fudud, si buuxda otomaatig ah, uma baahna qalliin xirfadeed / qalabayn
APTT / PT / TT / FIB
email:[emailka waa la ilaaliyay]
Cinwaanka ： No.265 Guyuan Road Hi-tech Zone, Changsha, Hunan, Shiinaha
Wararka & Ganacsiyada
Bogga ugu weyn / warbaahinta / Diabetes Care / Download / Nala soo xiriir
2001-2021 Xuquuqda Sinocare AI Waa La Siiyey